होन्डा सीबी 600 - बजेट संस्करण अद्यावधिक संस्करण
होन्डा सीबी 600 - सुरक्षित सबैभन्दा स्टाइलिश Roadman यो निर्माता हुन दावी गर्न सक्ने एक बाइक।
सिर्जना गर्न बाटो
हामी लामो समय पर्खेको। शरद ऋतु मा मिडिया त्यहाँ समूह असल पुरानो अरिङगाल तयार प्रतिस्थापन भनेर अफवाहहरु थिए। एकै समयमा यो तथाकथित जासूस शट को एक श्रृंखला गरिएको छ। तर, स्पष्ट, सँगै बढ्न भन्ने छैन, वा यसलाई भयो केही अन्य कारणले कुनै पनि भवन निर्माताहरु, तर वास्तवमा भन्ने छैन बस जीर्णोद्धार डबल होन्डा सीबी 600 अरिङगाल जारी थियो, मोटर-प्रशंसक समूह एक ब्रान्ड नयाँ मोटरबाइक प्रस्तुत। र यो बुझ्ने थियो। आखिर, 1997 भएकोले मोटरसाइकल लगभग अपरिवर्तित निर्मित थियो। र यो कसरी imperishable क्लासिक सोच्न बाध्य छ। कारण उत्कृष्ट ड्राइभिङ विशेषताहरु, उत्कृष्ट विश्वसनीयता, र उचित मूल्य, धेरै वर्ष को लागि यस मोडेल undemanding कम्पनी को दायरा मा सबै भन्दा राम्रो-बिक्री छलफल भएको थियो।
को होन्डा सीबी 600 को लागि मांग 2000 मा अलिकति मात्र कम गर्न थाले। एक सानो थप Bells र whistles र इन्जिन र चेसिस को सबै भन्दा राम्रो घटक संग - जबकि अन्य निर्माताहरु अर्को neoclassic उत्पादन गर्न थाले। त्यसपछि, 2005 मा, होन्डा अद्यावधिक अरिङगाल सिर्जना गर्न निर्णय गरेको छ, तर चाल काम गरेन। बाइक कक्षा प्रतिनिधिको नयाँ स्तर पुग्न छैन। र डिजाइनर को budgetary दृष्टिकोण, पूर्व एक आधार रूपमा प्रयोग भएको थियो जो त्यागेर, र "स्क्राच देखि" त्यसैले, बोल्न, एक मोटरबाइक विकास किनभने।
म यो बाइक बारेमा के भन्न सक्नुहुन्छ? आकाश र पृथ्वी - जब पुरानो तुलना नयाँ पुस्ता छ। पहिले, उनले मोटरबाइक काम भएको थियो। मा होन्डा सीबी 600 विनिर्देशों बस एक मध्यम गति र सान्त्वना मा शहर वरिपरि प्राप्त गर्न चाहने, को सवार को आवश्यकता पूर्णतया पूरा। तर नयाँ मोडेल - आधुनिक ऊर्जावान प्रकारका एक streetfighter। सबै परिवर्तन भएको छ। राउन्ड हेडलाइट्स aerodynamic ट्रिम टाउको प्रकाशिकी को आगमन बदलिएको थियो। यो सबै पूर्ण र इन्धन ट्यांक, openwork फिर्ता मा निहित पक्ष bends संग संयुक्त छ "पेशी" शक्तिशाली सीट हुन देखिन्थ्यो। प्राप्त को imposing रूपरेखा र तल्लो भाग। कारण कालो रंग वास्तविक मोटर "लीटर" देखिन्छ। एक रिज कठोरता एल्यूमीनियम थप्छ। यो एक पूर्ण बिभिन्न कार, धेरै उच्च र यसको पूर्ववर्ती भन्दा राम्रो छ।
हामी एकदम कडाई, बोल्न यो बाइक गर्न अत्यन्तै सकारात्मक मनोवृत्ति देखाउँछौं, 600. समीक्षा कायापलट थियो होन्डा सीबी निरपेक्ष निश्चितताका साथ भन्न सकिन्छ। र, यो उल्लेख गर्नुपर्छ, के को लागि हो। उदाहरणको लागि, इन्जिन sportbaykovsky CBR600RR। यो एकाइ 102 लिटर गर्न deforsirovan। को।, र एक महान सूचक गर्दा अन्य निर्माताहरु संग तुलना गरिएको छ। एक फिक्का पृष्ठभूमि, रूपमा अधिकतम मिलेका शक्ति विशेषता पनि होन्डा सीबी 600. यो मोटरसाइकल तुलना र सहज लाभ "घोडाहरू" गरे - यामाहा FZ-6 पनि सुजुकी GSR600। र, को पाठ्यक्रम, उत्पादकहरु को दक्षता सुधार गर्न सकेनौं। कारण नयाँ मोटर बाइक छैन मात्र शक्ति जित्छ, तर पनि वजन - माइनस5किलो! यो गर्दा शक्ति एकाइ कहीं अधिक सघन, वजन वितरण र Ergonomics योगदान जो कि टिप्पण लायक छ। यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ निलम्बन र कम लागत इस्पात फ्रेम द्वैध प्रतिस्थापित थिए एल्यूमीनियम subframes र ढाड फ्रेम।
बजेट विकल्प तल
पहिले यो नयाँ मोडेल को पूर्ववर्ती घृणित थियो भने थियो "workhorse।" तर यो बाइक डिजाइन मा डिजाइनर बजेटको सिद्धान्त पालना गरेनन्। यो बाँकी छ कि मात्र कुरा - त्यसैले यसलाई अपेक्षाकृत सरल निलम्बन छ। र बाँकी - सम्भावित प्रदर्शन र उपस्थिति - यो तीव्र र चरम ड्राइभिङ provokes। त्यसैले यो बाइक सिर्जना गर्ने, को होन्डा धेरै मोटर-प्रशंसक लागि मार्गदर्शक भए तारा पुन: रोशनी। बजार मा त्यहाँ एक नयाँ मोडेल, धेरै अरूलाई बाइक गम्भीर प्रतियोगी लागि भएको छ, जो छ।
यामाहा वा होन्डा?
यो धेरै गर्न चासो समस्या छ। यो उमेर-पुराना प्रतिद्वन्द्वी हो भनेर टिप्पण लायक छ। र अक्सर दुई तुलना यी मोडेल होन्डा सीबी यामाहा FZS6 Fazer संग 600F अरिङगाल: चिन्ता। तिनीहरूलाई एक - neyked, र अन्य poluobtekatel छ। यी सार्वभौमिक मोटरसाइकल दुई लोकप्रिय मोडेल हो, केहि सेकेन्ड को लागि एक सभ्य गति बढाउने पर्याप्त छ एक उत्कृष्ट क्षमता, छ। तिनीहरूले केहि thinned पनि यदि मोटर्स, जरा sporting डाटा बाइक छ। "होन्डा" - नव-शास्त्रीय, "यामाहा" - आधुनिक।
यो सडक बाइक मा डाटा विभिन्न तरिकामा आफूलाई देखाउँछ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, मोटर व्यवहार। होन्डा तुरुन्तै मोटरसाइकल सडक पेश गर्न तयार छ भनेर देखाउँछ। मोटर बास र sonorous गुरगुर गर्नु रगत stirs कि emits। यामाहा केहि calmer व्यवहार। र यदि बाइक को प्राविधिक विशेषताहरु प्रत्येक अन्य थप समान, आफ्नो पूर्ण बिभिन्न को प्रकृति। होन्डा - थप विचारशील, दार्शनिक शान्त र यामाहा - आक्रामक hooligan। सामान्य मा, प्रशंसक गति र शक्ति, स्वतन्त्रित एक तनावमुक्त सवारी रुचि, नियम, दोस्रो embodiment रूपमा चयन, जो - पहिलो। सामान्य मा, यहाँ समाधान आफ्नो प्राथमिकता मा निर्भर गर्दछ।
अवलोकन पिट बाइक "Irbis" TTR 125
तेज मोटरसाइकल। अकल्पनीय तर साँचो
रोड रेसिङ चौकोर - चरम लागि ट्रक
Mariupol मा मत्स्य पालन: जान जहाँ राम्रो?
सरल कार्बोहाइड्रेट आहार
Nalchik रेस्टुरेन्ट। शहर को सबै भन्दा राम्रो संस्थाहरु को शीर्ष 5
सुझाव र नियमहरू: को लागि शुरुआती अभ्यास stretching